Sunifiram (DM235) vovoka (314728-85-3) hplc≥98% | AASraw Nootropics
/ Products / Nootropics vovoka / Sunifiram (DM235) vovoka
SKU: 314728-85-3. Sokajy: Nootropics vovoka
Ny AASraw dia miaraka amin'ny fahaizana sy ny vokatra azo avy amin'ny gram amin'ny filamatry ny Sunifiram (DM235) (314728-85-3), eo ambany fanaraha-maso CGMP sy ny rafitra fanaraha-maso kalitao.
Sunifiram (DM235) video volo
Sunifiram (DM235) karazan-tsoratra fototra tsotra
Name: Sunifiram (DM235) vovoka
Formula Molecular: C15H13F2NO2S
Meny fitetezana 309.33
Storage Temp: Arovy amin'ny hafanana na ny cooler
Color: Vovoka mena na tsy fotsy
Mampihena ny fampiasana ny hoditra Sunifiram (DM235)
Ny poezia Sunifiram, poids DM235 dia miaraka amin'ny anarana hoe BisfluoroModafinil, Flmodafinil.
DM235 Usage Usage
Ny dite DM235 dia tantara noforomporonina tsy manam-pahataperana sy AMPAkine izay misy fiantraikany amin'ny fampihetseham-po amin'ny biby.
Ny poezia Sunifiram dia piperazine izay misy fitoviana mitovy amin'ny piracetam. Ny piracetam dia novolavolaina noho ny aretina vokatry ny neurodegenerative toy ny aretina Alzheimer, ary ny poofa Sunifiram dia fantatra amin'ny fampitomboana ny asan'ny cognitive amin'ny fanandramana sasantsasany. Ao amin'ny fanadihadiana mifamatotra, ny porofo manjono Sunifiram dia tsy mampiseho ny fiombonana amin'ny mpitsabo na ny fantsom-panafody (tsy misy fifandraisana amin'ny 1μM ho an'ny serotoninergic, dopaminergic, muscarinic, nicotinic, adrenergic, glutamatergic, histaminergic, opioid, na GABAergic receptors), nefa mampirisika ny famotsorana Acetylcholine avy amin'ny cortex rat cerebral, azo inoana fa amin'ny alalan'ny fampitomboana tsara ny valin'ny receptor AMPA.
Ny poizina Sunifiram dia manakana ny amnesia indraindray amin'ny scopolamine, aorian'ny ip sy ny fitantanana po, amin'ny fitsapana fialana amin'ny fialana amin'ny fitsaboana kely miaraka amin'ny fihenam-bidy kely 0.01 mg / kg po Ny fihenan'ny antiamenika ny vovobony Sunifiram dia azo oharina amin'ny fampiasana fanafody malaza tsyotropic toy ny piracetam (30 mg / kg IP), aniracetam (100 mg / kg po) ary rolipram (30 mg / kg po), saingy amin'ny hery 1,000 - 10,000 fotoana avo kokoa.
Fampitandremana momba ny voka-dratsin'ny poizina DM235
Ny poezia Sunifiram (DM-235) dia singa fikarohana momba ny fikarohana piperazine izay misy fiantraikany amin'ny fiompiana anti-amnesiac amin'ny fianarana biby izay manana hery lehibe kokoa noho ny piracetam. Ny vovony menaka Sunifiram dia fanamafisana ny molekiolan'ny unifiram. Raha jerena amin'ny fianarana vitro sy biby, dia toa hita fa ny polisy Sunifiram dia miasa amin'ny alàlan'ny fampidirana AMPA-receptor.
Ny vovo-dronono Sunifiram dia miasa amin'ny fampidirana ireo mpikatroka AMPA; izany hoe ireo mpitsabo izay tompon'andraikitra amin'ny fanelanelanana amin'ny fifindran'ny synaptika ao amin'ny rafi-pitabatabana ao an-toerana. Ny mekanika koa dia mampitombo ny phosphorylation ny AMPAR sy ny NMDAR amin'ny alàlan'ny fampidirana protein kinase, izay mampitombo indray ny fampandrosoana maharitra - izany hoe, fampitomboana ny fifindran'ny mari-pana eo amin'ny roa ny neurons vokatry ny fanentanana simultaneous.
Ny fihenan'ny kinasasan'ny taratra Sunifiram koa dia manatsara ny fahavoazana mahatsikaiky. Ankoatr'izay, ny vovony manerantany Sunifiram dia miasa ao amin'ny tariby matevina amin'ny karazam-pitsaboana biby amin'ny fanampiana amin'ny fanafahana ny acetylcholine, ny molecule organika izay miasa toy ny neurotransmitter amin'ny karazam-borona maro samihafa. Ireo fepetra fampiharana ireo dia manome ny vovobony Sunifiram hampihatra ny toetra amam-panohitra.
Ny poizina Sunifiram koa dia afaka misoroka ny amnesia indraindray amin'ny mikrailamine mpanohitra nikotinika, ny baclofen agonist GABAB, ny clonidine agonist α2 ary ny AMPA mpitsabo mpanohitra NBQX amin'ny test de passive passive.
Ao amin'ny test de maze de rat Morris, ny fitantanana ny scopolamine dia manakana ny fihenan'ny fahalavoana tsy ho afa-miala amin'ny famerenana ny famerenana sy ny famerenana ny fanadinana. Sunifiram roapolo volo, entina 20 miny alohan'ny isaky ny fampiofanana isan'andro, dia afaka misoroka ny tsy fahampian'ny fahitalavitra Scopolamine amin'ny 0.1 mg / kg IP
Ny poizina Sunifiram dia mamokatra ny vokatra azo avy amin'ny antiamenika sy ny fanevatevana tsy misy fanovana hita ao amin'ny fihetsika mahery vaika amin'ny totozy na rat, ary amin'ny 0.1 mg / kg IP, ny poizina Sunifiram dia mampihena ny faharetan'ny hypnose indraindray amin'ny pentobarbital amin'ny totozy tsy manova ny fotoana fampidirana ny hypnose. Ankoatra izany, ny totozy voapoizina amin'ny poizina Sunifiram dia mitazona ny fandrindrana ny motera amin'ny test de rotarod. Ny habetsaky ny toetran'ny totozy, izay novalian'ny fitaovana Animex, ary ny fitondrantenan'ny fikarohana, izay novalian'ny fitsaboana lavaka, dia mitoetra ho ara-dalàna amin'ny fitondrana Sunifiram.
Ny vovony mangatsiaka Sunifiram dia manova ny fifindran'ny cholinergika ao amin'ny boron-koditra mihetsiketsika mihetsiketsika. Araka ny asehon'ny mikrodialysis fanandramana, ny poezia Sunifiram dia afaka mampitombo ny famoahana ACh amin'ny dosie 0.01 mg / kg, miaraka amin'ny hery ambony kokoa noho i Unifiram.
Ny fiparitahan'ny fôsily hippocampal ratin'ny 100 μM NMDA dia mampitombo ny fihenan'ny [3H] NE (48). Ny voka-dratsin'ny NMDA dia nosakanan'ny ADN 100 μM kynurenic (KYNA). Ny fametrahana ny fihenan'ny nanômôlina ny vovony amin'ny solika Sunifiram dia manova tanteraka ny fanoherana KYNA. Ny voka-dratsin'ny poofa Sunifiram dia tandindomin-doza (EC50 0.1 μM) ary efa vita tanteraka amin'ny 1 μM.
Ny fandraisan'anjaran'ny mpitsabo AMPA dia azo dinihina amin'ny fampiharana ny mpifidy AMPA mpikatroka mpanohitra NBQX. Raha ampiharina ao amin'ny 5 μM, ny NBQX dia manakana ny famotsorana [3H] NE izay entin'ny AMPA (100 μM), fa tsy ny 100 μM NMDA-mediated tritium azo avy amin'ny tsoka hippocampal raty (48). Ny NBQX, tsy mavitrika amin'ny tenany manokana, dia manohitra ny fanimbana ny vovonan'ny Sunifiram amin'ny fanoherana KYNA amin'ny famoahana tritium NMDA, izay manolo-kevitra ny fandraisan'anjaran'ny mpitsabo AMPA amin'ny voka-dratsin'ny Sunifiram.
Tsara homarihina, fa teo ambany fitondran-dabozia ny SunCirum (Ser-657) sy ny Src fianakaviana (Tyr-416) dia niasa tamin'ny karazana LTP, izay niavaka tamin'ny 10 nM. Ny fihenan'ny PHPCa (Ser-657) sy Src (Tyr-416) nasehon'ny poezia Sunifiram dia nanelingelina ny fitsaboana 7-ClKN. Ny fampitomboan'ny LTP amin'ny alàlan'ny Sunifiram dia vetivety dia nosakanan'ny PP2, famindrana fianakaviana Src.
Farany, rehefa nadinadinina tamin'ny glycine avo lenta (300 lM), ny fitsaboana Sunifiram dia tsy nahavita niaro LTP tany amin'ny faritra CA1.
Mifamahofaho fa ny porofo etsy ambony dia manome soso-kevitra fa ny vovon-koditra Sunifiram dia manosika ny tranonkala glycine-binding an'ny NMDAR miaraka amin'ny fidirana PKCa miaraka amin'ny Src kinase. Ny fampiroboroboana ny asan'ny PKCa dia manosika ny fampidinana ny hippocampal LTP amin'ny alàlan'ny fampiasana CaMKII.
Sunifiram (DM235) Rovaha maina
Ho an'ny lamina lehibe kokoa (Ao anatin'ny 1kg) dia azo alefa amin'ny 3 andro fiasana aorian'ny fandoavana.
DM235 vovoka Marketing
Ahoana ny hividianana vovony DM235: mividiana ny vovony Sunifiram avy any AASraw
Sunifiram (DM235) Fofona Rohibe:
IDRA-21 vovoka (22503-72-6)